मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	1 जून 2020 मा	• 12 टिप्पणिहरु
मिनियापोलिसमा पुलिस अधिकारीहरू डेरेक एम। चाउविनले कालो मानिस जर्ज फ्लाइडको हत्यामा आवश्यक श susp्कास्पद तत्त्वहरू पाए जसले गृहयुद्धको योजनालाई जानाजानी शुरू गरेको हो भन्ने धारणा दिन्छ। यो भन्नु एकदम संक्षिप्त हुनेछ कि हामी एउटा फिल्म निर्माणसँग काम गरिरहेका छौं र अवश्य पनि हामी षडयन्त्र चिन्तकहरू भन्न चाहँदैनौं।
अझै, यो बुझ्नको लागि उपयोगी छ कि आजको ग्रिनस्क्रीन र CGI प्रविधिहरूको साथ पूर्ण रूपमा गहिराइका चराहरू र जीवन घटनाहरू (स्मार्टफोन भिडियोहरू र साक्षीहरूका बयानहरू सहित) स्टेज गर्न गाह्रो छैन। यसको बारेमा पढ्नुहोस् यहाँ थप.
जर्ज फ्लोयड घाँटीमा minutes मिनेट को लागी घुँडाले थिचिएको छ भन्ने तथ्य र यो यति व्यापक रूपमा चित्रित गरिएको तथ्यलाई शंकास्पद भन्न सकिन्छ।
षडयन्त्रपूर्ण सोचको कलंकबाट बच्न, मुख्यधारका मिडियालाई पनि सन्दर्भ गर्न उपयोगी छ। विशाल लुट र आगलागी गरिएको भवनहरूको मात्रा पेसागत दots्गा जस्तो गन्ध आयो। यदि मिडियाले यसलाई पनि सन्दर्भ गर्दछ भने, एक अलार्म घंटी बज्नु पर्छ।
ब्ल्याक लाइभ मैटरका प्रदर्शनकारीहरूको विस्फोटक प्रतिक्रिया कुनै एक्लो छैन, किनकि एन्टीफा प्रदर्शनकारीहरू पनि दot्गामा सामेल छन्। फक्स न्यूजका लारा लोगानले ट्रान्सजेंडर होस्टको अन्तर्वार्तामा वर्णन गरे कि यी पेशेवर दंगा हुन्। के उनी भन्छिन, तर के म तपाईंलाई दर्साउँछु, त्यो कि मास्टर स्क्रिप्टका महिला र सज्जनहरूले लामो समयदेखि यस अराजकतालाई योजना गरेका थिए। अमेरिका अराजकता मा पर्नु पर्छ। यसको मतलब यो हो कि हामी सायद नागरिक सैनिकहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छौं; पेशेवर दंगा गर्नेहरू आउने गृहयुद्धको प्रज्वलन गर्न।
द cities्गालाई अन्य शहरहरूमा स्किप गर्नु भनेको आफैंमा भित्तामा एउटा चिन्ह हो जुन पछाडि त्यहाँ नियन्त्रित फोर्स क्षेत्र छ। यो वर्णन गर्न असम्भव छ कि डेरेक एम। चाभिन पुलिस हत्या (किनकि हामी यसलाई भन्न सक्छौं) १ मानिसमा धेरै हिंसा हुन्छ। वास्तवमा यो वर्णन गर्न असम्भव छ कि यो हत्या यति व्यापक रूपमा एजेन्टद्वारा चित्रित गरिएको थियो र सँगी पुलिस अधिकारीहरूले केही गरेनन्। यो एक मुख्य शत्रुको रूपमा पुलिस संग गृह युद्धको लागि धकेलिएको छ।
साथै वेबसाइट DFNS Veterans डेट्रोइट, एटलान्टा र मिनियापोलिसबाट ध्यानपूर्वक जाँच गरियो र पेन्टागन ठेकेदारहरू भेट्टाए जसले हरेक विरोधमा भाग लिए। तिनीहरू ती हुन् जसले फायर बमहरू वितरण गरे र ठूला ढु stones्गाहरू फ्याँके। तिनीहरू हिंसा ड्राइभ गर्नेहरू हुन्।
धेरै वर्षदेखि मैले पूर्वानुमान गरेको छु कि अमेरिकी आधिपत्य संसारमा बर्बाद भयो। कोरोनाभाइरसको संकटले debtण माउन्ट बबलको मुद्रास्फीति पहिले नै ट्रिगर गर्यो। लकडाउन र सामाजिक दूरीले जनसंख्याको बीचमा पहिले नै पर्याप्त तनाव सिर्जना गरिसकेको छ र अब जब यी द ri्गाई पेशागतरुपमा उत्तेजित भएको देखिन्छ, इच्छित अराजकता नजिकै छ।
जब सम्राट नेरोले आफ्नो साम्राज्यको नियन्त्रण गुमाए, उनले रोमलाई जलाए (त्यस्तै एक ऐतिहासिक व्याख्यान पनि हो)। महान अमेरिकी साम्राज्य पतन हुनुपर्दछ र गृहयुद्धले शक्तिको शून्यता सिर्जना गर्नुपर्दछ। तपाईं जहिले पनि अराजकता बाहिर नयाँ अर्डर सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो हुनु अघि, अमेरिकी अर्थव्यवस्थाले यसको डलरमा डलर तान्नुपर्दछ। यसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्नेछ, तर यसले निश्चित रूपमा विश्वव्यापी वित्तीय रिसेटको लागि ठाउँ सिर्जना गर्दछ, डलरले स्थायी रूपमा यसको लागि "विश्वसनीय ट्रेडिंग मुद्रा" र विश्व स्तरको रूपमा यसको स्थिति गुमाउने छ। यो मास्टर स्क्रिप्टको सबै अंश हो जुन मैले २०१ 2019 पुस्तकमा वर्णन गरें।
स्रोत लिङ्क सूची: veterans.dfns.net
पूर्वानुमान: अमेरिकी गृहयुद्ध, युरोपमा अराजकता, नाटोको ब्रेकअप र टर्कीको उदय (एएसएसएएम)
उच्च बेरोजगारी र धेरै दिवालियापन, एक मात्र तरिका वर्तमान सरकारलाई छोड्नु हो
के प्रणाली आफैंमा पतन हुनेछ, यदि हामीले केहि पनि नगरे पनि?
ट्याग: अतिफा, कालो, गृहयुद्ध, chauvinist, Derrek, डलर, विशेष, जर्ज फ्लोयड, जीवन, M., कुरा, प्रोफेशनल, दलालहरू
लिडिया रुस्जे लेखे:
1 जून 2020 मा 15: 38
धेरै जसो "विरोधकर्ता" मास्क लगाउँछन्। कोरोनाको डर छ तपाईले कारलाई आगो लगाईदिँदा? हो निश्चित। अवश्य।
1 जून 2020 मा 15: 41
यो एउटा ठूलो लिपि हो र संयोगले केही पनि हुँदैन, सामान्य संदिग्धहरूले आर्केस्ट गरिएको यो प्लेले यसको पछाडि ओर्डो अब चाओ मास्टर प्लानलाई धोका दिन्छ। अश्‍लील अभिनेता फ्लोयड चौविनलाई १ 17 बर्ष भन्दा बढी समयदेखि चिन्थे र पोर्टरको रूपमा नाइटक्लबमा काम गर्थे, चौविनको गिरफ्तारीको पुलिस डाटाबेसमा पनि कुनै चिन्ता छैन किनकि होक्स !! जनता यस विश्वासघातको लागि गिर्छन् कि ब्रेन धुने को वर्षहरु तिर्न लागेका छन्।
ओहो हो फ्लोयड म सास फेर्न सक्दिन एनबीए बास्केटबल खेलाडीहरूको एनएलपी दर्पण। कोबे ब्रायन्ट (कोरोना) लेब्रन जेम्स आदि।
1 जून 2020 मा 15: 47
1 जून 2020 मा 18: 05
1 जून 2020 मा 18: 25
क्लासिक Cointelpro रणनीति, यो Robertson नामको एक एजेन्ट जस्तो देखिन्छ। तपाईंसँग एन्टिफा जस्तो आतंक संगठन पनि छ जुन सामान्य संदिग्ध सोरोस द्वारा प्रायोजित हो। सामान्य रूपमा तिनीहरू दुबै खेल्छन् ..
1 जून 2020 मा 18: 30
फ्रिमासनरी-कम्युनिज्म-सियोनवाद सबै सामान्य संदिग्ध व्यक्तिको हातले उपकरणमा हात हाल्छन्।
1 जून 2020 मा 18: 17
हप्ताको अन्तमा मैले प्रत्यक्ष छविहरू र गैर-प्रत्यक्ष रिपोर्टहरू हेरी; यो तपाईं सामान्य रूपमा रिपोर्ट गर्ने तरिका छैन यदि यो वास्तवमै एक सहज राज्य हो भने; तपाईंहरू ती जो हक्सिंग र भित्री जागिरमा नयाँ हुनुहुन्छ र निश्चित हुनुहुन्न यदि यी सबै साँच्चिकै जानबुझी छन् भने, वाईटीमा भिडियो हेर्नुहोस् र आफ्नै लागि सोच्नुहोस्;
उदाहरण को लागी, यो सँधै जोड दिइन्छ कि पसलका मालिकहरुका लागी कत्ति खराब छ कि उनीहरुको व्यवसायमा आगलागी छ र उनीहरु लाई आशा छ कि यसका लागि बीमा गरिएको छ र यसले अर्थव्यवस्था आदिका लागि भयानक परिणाम भोग्न सक्छ इत्यादि। यसैले यहाँ फ्रान्समा म मुख्यतया फ्रेन्च खोज परिणामहरू पाउँछु र यो स्पष्ट छ; तिनीहरू यहाँ विद्रोह पनि चाहन्छन्। त्यो मान्छे वास्तवमै मरिसकेको छ भनेर विश्वास नगर्नुहोस्, तर तपाईले ती मानिसहरूलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ जसले मिठो केकले जस्तै विगतका केही वर्षहरूमा आतंकवादी छल र डिप फ्याक्स लिएका छन्? मैले हालसालै मेरो ससुराली र परिचितहरूलाई उनीहरू २०१२ ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहको बारेमा के सोच्छु भनेर सोधे। उनीहरूको कुनै राय थिएन; हामी धेरै दु: खी छौं;
1 जून 2020 मा 20: 39
वास्तवमा एजेन्ट डेरेक चौविन कुनै पनि होइन, तर वास्तवमा यो श्री बेन्जामिन रे हेली हो। र त्यहाँ मिस्टर फ्लोडको बारेमा धेरै कथाहरू पनि छन्, उनको छातीमा ट्याटू थियो जुन यस्तो थियो: ओर्डो विज्ञापन चाओ, अराजकता बाहिर आदेश।
ती व्यक्ति जसले पूरै चीजमा आगो लगाउँदछन् एन्टिफा सदस्यहरू हुन् र तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि हामीलाई पैसा दिइयो। भाग्यवस, धेरै व्यक्तिहरू यसलाई जान्दछन्।
2 जून 2020 मा 14: 11
सामान्य संदिग्धहरूको भिजेको सपना साकार भएको छ, अब हामी आफैले बनाएको मोशियाच समाधान हस्तान्तरण गर्नु अघि केही बेर कुर्नु पर्छ।
2 जून 2020 मा 16: 50
2 जून 2020 मा 23: 08
धेरै बर्षदेखि मैले सुरक्षा र अन्य सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षा दिने काम सिकाएको छु। गिरफ्तार र नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू पनि यसका अंश हुन्।
एक जना साथीसँग बारम्बार भिडियोहरू हेरेपछि, हामी छिट्टै यो निष्कर्षमा पुग्यौं कि यो मान्छे मरेको छैन। कम्तिमा पनि पक्राउको कारणले होइन जुन भिडियोहरूमा देख्न सकिन्छ। सबै भन्दा पहिले, मानिस आफ्नो पेट मा छ, र घुडा घाँटी मा छ। जे भए पनि तपाईले जति धेरै दबाब गर्नुभयो, घाँटीबाट यत्तिको बल दिन सक्नुहुन्न कि वाइन्डपाइप बन्द छ। दोस्रो, यदि तपाईं चिच्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईं सास पनि लिन सक्नुहुन्छ।
सम्भवतः धेरै नराम्रो कुरा मात्र हुन सक्छ कि तपाईं दिमागमा धमनी पिन्च गर्नुहुन्छ। तर त्यसो भए ऊ आधा मिनेट भित्र जान्छ र उदाहरणका लागि कडा उसको अनुहार रंगिदिन्छ।
तर तपाईले यसलाई आँखाले नहेर्नुभएको देख्नुहुन्न, छालाको रंग राम्रो छ, कुराकानी गर्न अझै पर्याप्त हावा छ, नियन्त्रण प्राविधिक पूर्ण आनुपातिक नहुन सक्छ, तर निश्चय पनि घातक हुँदैन। यो तरिका होईन।
4 जून 2020 मा 07: 43
हो, जर्ज फ्लोडसँग पनि कोरोना थियो। कोरोनाको मन्त्र सबै चीजमा सम्मिलित छ। सबै पछि, सबै एक कोरोना ट्रान्स मूडमा कन्डिशन्ड रहनु पर्छ।
बिरामीहरूले लामो समय अस्पतालमा कुर्नु पर्छ। त्यसो भए ती डाक्टरहरूले के गर्छन्। के तिनीहरू सबै कोरोना 'भाइरस' मा विशेषज्ञ छैनन्? प्रतीक्षा गर्ने बिरामीहरुलाई आगामी कोरोना मृतको रूपमा गणना गरिएको छ। तपाईले बिरामी वा डाक्टरलाई मुद्दा हाल्नुहुन्छ। कम्तिमा एउटा गुनासो गर्नुहोस्। डरको लागि निष्क्रिय नबस्नुहोस्। सँधै त्यो अनन्त डर तर जनता अझै पनि विश्वास गर्छन् कि उनीहरू स्वतन्त्र छन् र 'संवैधानिक राज्यमा' बस्छन्?
« कोरोना क्रिसिस कोविड -१ 19 २०० MS एमएस ब्लास्टर भाइरस बिल गेट्स अभिनीत याद ताजा गरीरहेको छ
बाँध स्क्वायरमा हजारौं व्यक्तिहरूले जर्ज फ्लोइडको लागि विरोध प्रदर्शन गरे वा कसैलाई थाहा छैन? »
कुल भ्रमण: 4.295.541
guppy op कोरोनाभाइरस कोविड - १ nose नाक परीक्षण अत्यन्त कष्टकर छ र हुनसक्छ तपाईको DNA लिन्छ